Wiricheya Musoro Kutsigira Sisitimu - Wiricheya Musoro weChigaro
Imhandoi wiricheya rutsigiro sisitimu ini yandinoda?
Karman Healthcare inopa anopfuura zana zana marudzi e manual mavhiripu izvo zvine huwandu hwakawanda hwezvinhu uye sarudzo. Zvimwe zvinopa vashandisi izvo zvinoshandiswa kufamba nguva dzose, zvimwe zvinopa vashandisi vangangodaro vachida tilt kana kutsenhama kuitira nyaradzo uye nenyaya dzine hukama nehutano.
Our wiricheya Zvikamu zviri Chinyorwa mavhiripu, iyo inosanganisira Ergonomic mavhiripu, Ultra Chiedza mavhiripu, chiedza mavhiripu, Kutakura mavhiripu, Standard mavhiripu, Recliner mavhiripu, Tilting mavhiripu, Anoshanda kana Emitambo Chairs, Bariatric kana Heavy Duty zvigaro, nevana kana vana mavhiripu.
wiricheya Musoro Kutsigira Maitiro anoshandiswa kubatsira a wiricheya mushandisi ane chero mutsipa unonetsa kana kushushikana kwavanako kana kushandisa chigaro chavo. Musoro uye Neck Tsigiro Systems inogona kuiswa kune iyo furemu ye wiricheya, zvikamu zvegungano zvinosanganisirwa. Kuongororwa kwezvinodiwa nemushandisi maererano nerutsigiro rwemusoro kunofanirwa kuitwa kuitira kuti ugone kunyatsogadzirisa iyo headrest system.
apo wiricheya Headrest yakasungirirwa ku wiricheya, iyo headrest pad inofanirwa kudzoserwa kumashure kubva kumushandisi uye inofanira kunge yakasununguka zvakakwana kuti igadzirise. Tenderedza zvinyoronyoro uye tweak iyo headrest pad kuti uve nechokwadi chakanakira chinzvimbo. Izvo zvakakosha kuti iyo pad ive yakaenzana uye pakati inorema.
Kugadzirisa a wiricheya Musoro Kutsigira Sisitimu, zvakakosha kumunhu ane ruzivo, senge wiricheya nyanzvi kana murapi akadzidziswa kuita zvese zvigadziriso zve Headrest Sisitimu.
Karman Healthcare inopa dzakasiyana siyana dzemusoro uye mutsipa masisitimu ekutsigira. Nemaitiro akakodzera ekumisikidza, zvinokwanisika kukwirisa Headrest System pane yakawanda yakajairika bhuku mavhiripu.
Kuchengetedza Ne Headrest - Musoro uye Neck Tsigiro Systems
Kuongorora kwevhiki nevhiki kunofanirwa kuitiswa kuti uone kuti zvese zviri munzvimbo chaiyo. Nzvimbo yakagadzika yekugara inofanirwa kuve iri munzvimbo ine yakakosha kutarisa kunzvimbo chaiyo yekugara.
Iwe unofanirwa zvakare kutarisa Musoro Wako Kutsigira Sisitimu pamwedzi kuti uve nechokwadi chekuti hapana rinorema kupera uye kubvaruka. Kana paine huwandu hwakawanda hwekukuvara kana kupfeka, iwe unofanirwa kutsiva iyo Headrest Pad. Ita shuwa kana mumwe munhu aripo kushandisa Musoro Wemutsigiro Sisitimu iyo isina kumanikidza kwakanyanya pamutsipa wemushandisi, izvi zvinogona kutungamira pakurambidzwa kweropa.
wiricheya Kugara, Kudzoka Rests uye Headrests. Iwe unocherekedza zviratidzo zvekutsungirira kutsvuka kana kutsamwa, unofanirwa kumira kushandisa iyo Headrest nekukasira. Yedu wiricheya Musoro wepamusoro wakagadzirirwa kuti uve wakasununguka uye unogara kwenguva refu, iwe unogona zvakare kuubvisa nyore kubva kumagumo ekugamuchira velcro kuti ugone kuishambidza.
Ndinoda here wiricheya Musoro Kutsigira Sisitimu?
Iwe ungangoda musoro wekutsigira system.
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve yedu wiricheya musoro wekutsigira system.
Makomendi kana Mibvunzo?
Tinoda kunzwa kubva kwauri! Kubva pamibvunzo nezve Karman zvigadzirwa uye masevhisi Karman Healthcare zvinopihwa, kune zvakataurwa nezve webhusaiti yedu kana kwaziso ine hushamwari, fomu iri rinokutendera kuti utaure zvakananga neKarman Healthcare. Ndokumbirawo usasanganise chero ruzivo rwakavanzika kana rwakavanzika mune ino fomu. Kana kubvunza kwako kuchida kuti iwe udaro, ndokumbira utifonere.
Runhare: (800) 80-KARMA (1-800-805-2762) Nhare: (626) 581-2235 Fax: (626) 581-2335